एन्ड्रोइड इलाभेन सार्वजनिक, यस्ता छन् ११ नयाँ फिचर - सिम्रिक खबर
एन्ड्रोइड इलाभेन सार्वजनिक, यस्ता छन् ११ नयाँ फिचर
गूगलले आफ्नो पछिल्लो अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड इलाभेन सार्वजनिक गरेको छ । यो अपरेटिङ सिस्टम गूगलको पिक्सेल टू र त्यसमाथिका स्मार्टफोनका साथमा वानप्लस, साओमी, ओप्पो, रियलमी लगायतका फोनका प्रयोगकर्ताहरुले प्रयोग गर्न पाउनेछन् । यसअन्तर्गत पिक्सेल टू, थ्री, थ्री ए, फोर र फोर ए मा नयाँ अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न सकिन्छ । उत्तर अमेरिका, युरोप र भारतमा वानप्लस एट र एट प्रोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । ओप्पोका एक्सटु र रेनो थ्रीका साथमा रियलमीको एक्स फिफ्टी प्रो र साओमीको मी एमआई टेन र एमआई टेन प्रो मा पनि एन्ड्रोइड इलाभेन अपडेट गर्न सकिन्छ ।
तपाईंले केही वर्षदेखि आँकलन गरेका धेरै फिचरहरू त एन्ड्रोइड इलाभेनमा छैनन् । तर मेसेजिङ, प्राइभेसी र स्मार्ट डिभाइसमा कन्ट्रोल गर्न दिने फिचरहरु यसले दिएको छ । प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ लाग्ने केही फिचरहरु यस्ता छन्, जसले दैनिक जीवनमा निकै महत्व राख्छन् । मेसेजिङ एप चलाउन निकै सरल बनाएको एन्ड्रोइड इलाभेनले प्रयोगकर्ताको गोपनियतालाई ध्यान दिँदै अपडेटेड फिचर ल्याएको छ । साथमा फोनबाटै स्मार्ट डिभाइसमा कन्ट्रोल गर्न नयाँ फिचरहरु यो अपरेटिङ सिस्टमले दिनेछ । यस्ता नौला लाग्ने फिचरका बारेमा गूगलले आफ्नो ब्लगमार्फत् जानकारी दिएको छ ।
मेसेजिङ फिचरको प्रयोगसँगै सञ्चारको नयाँ तरिका
१. यो एपमा धेरै मेसेजिङ एपहरुलाई एकै ठाउँमा राख्न सकिने फिचर छ । यसअन्तर्गत म्यासेजिङ एपमा भएका कुराकानी (टेक्स्ट कन्भर्सेसन) नोटिफिकेसन सेक्सनको डेडिकेटेड स्पेसमा लैजान सकिन्छ । यसकारण एकै ठाउँबाट तपाईंले कन्भरसेसनलाई म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंले आफ्ना महत्वपूर्ण व्यक्तिहरुको म्यासेज नछुटोस् भन्नका लागि प्राथमिकतामा त्यस्ता कन्भरसेसन राख्न समेत सक्नुहुन्छ ।
२. यस्तै एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ अपडेटमा ‘बबल्स’ फिचर उपलब्ध छ, जुन तपाईंको डिभाइसमा मल्टी टास्किङ फिचर हो । यो फिचरका कारण कुनै एपमा मेसेज आउँदा फेसबुक मेसेन्जर जस्तै आफूले चलाइरहेको एप बन्द नगरिकनै रिप्लाई दिन मिल्छ । बबल्स ड्र्याग गरेकै आधारमा तपाईंले धेरै काम छिटो गर्न सक्नुहुन्छ ।
३. अन्ततः गूगलले यसमा ब्युल्ट-ईन स्क्रीन रेकर्डिङ फिचर ल्याएको छ । अब तपाईंले आफ्नो फोनमा के भइरहेको छ भनेर स्क्रीन क्याप्चर गर्न वा रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ।
४. अब तपाईंले फोनको पावर बटनमा प्रेस गरेकै भरमा कन्ट्रोल स्क्रीन ल्याउन सक्नुहुन्छ र स्मार्ट डिभाइसहरुमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ । कुनै मल्टिपल एपहरु नखोलिकनै तपाईंले आफ्ना कनेक्टेड डिभाइसहरु नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ ।
५. एन्ड्रोइड इलाभेनबाट सञ्चालित मोबाइलमा वायरलेस रूपमै एन्ड्रोइड अटोले काम गर्नेछ । गूगल असिस्टेन्टको सहयोग लिएर तपाईंले म्यापको डिरेक्सन प्राप्त गर्न, बोलेरै टेक्स्ट पठाउन र आफ्नो मनपर्ने मिडिया (अडियोरभिडियो) प्ले गर्न सक्नुहुन्छ ।
६. एन्ड्रोइड इलाभेनमा मिडिया कन्ट्रोलको फिचर परिमार्जित रूपमा आएको छ, जसका कारण यो फिचर पहिलेभन्दा थप सहयोगी बन्न सक्छ । यसबाट प्ले भइरहेको मिडिया तपाईं सजिलै स्वीच गर्न सक्नुहुन्छ । साथमा यसले नोटिफिकेशन शेडबाट एकदमै छिटो आउटपुट अडियो छान्ने सुविधा दिएको छ।
गोपनीयता र डेटामा प्रयोगकर्ताकै नियन्त्रण
७. माइक्रोफोन, क्यामेरा, लोकेसन आदिका लागि एकपटक अनुमति लिएर मात्रै एक्सेस गर्न मिल्ने सुविधा दिइएको छ । जसका कारण अर्कोपटक एप चलाउँदा अनुमतिका लागि अनुरोध गर्दछ । अप्रुभ गरेपछि मात्रै यी एप चलाउन मिल्नेछ । यसले गर्दा अन्य व्यक्तिले तपाईंको एपमा सहजै प्रवेश पाउन सक्ने छैनन् ।
८. यदि तपाईंले आफ्नो डिभाइसमा कुनै एप इन्स्टल गरेपनि प्रयोग गर्नुभएको छैन भने पक्कै पनि तपाईंले यो एपबाट आफ्नो डेटा एक्सेस नहोस् भन्ने चाहनुहुन्छ । अब ‘अटो-रिसेट’को सहयोगले तपाईंले प्रयोग नगरिरहेका एपको सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । यस्ता प्रयोग नगरिएका एपको सुविधा प्रयोग गर्नपरे पुनः अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ ।
९. गूगल प्ले सिस्टम अपडेट मोड्युलमा आएको फिचरका कारण तपाईंको फोन सधैं सुरक्षित राख्न, गोपनीयता कायम गर्न र अपडेटेड गरिरहन सक्नुहुन्छ । यसले कुनै समस्याको समाधानका लागि अर्को अपरेटिङ सिस्टम कुर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिदिएको छ ।
१०. एन्ड्रोइडका इन्टरप्राइज प्रयोगकर्ताका लागि एन्ड्रोइड इलाभेनले आफ्नो व्यक्तिगत डिभाइसदेखि कम्पनीको डिभाइसमा प्राइभेसी प्रोटेक्सन गर्ने फिचर ल्याएको छ । यसले तपाईंको फोनमा रहेको एक्टिभिटी वा व्यक्तिगत प्रोफाइल मनिटरिङ नगरिकनै आईटी डिपार्टमेन्टले डिभाइसलाई म्यानेज गर्न सक्छ ।
११. यदि तपाईं गूगलको पिक्सेल टू वा अझै माथिका फोन चलाउनुहुन्छ भने एन्ड्रोइड इलाभेनबाट आफ्नो फोन म्यानेज गर्न वा अर्गनाइज गर्न अझ धेरै फिचरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । जस्तै तपाईंको दैनिक रुटिनको आधारमा फोनको होम स्क्रीनमा एपहरु अपरेटिङ सिस्टमले नै सजेस्ट गर्छ । त्यस्तै गूगल म्यापको लाइभ भ्यू फिचरमा लोकेसन सेयरिङ गर्ने नयाँ सुविधा प्रयोगकर्ताले पाउनेछन् ।